Warka - Qaybta miiraha ee sifaynta biyaha waa in si joogto ah loo beddelaa. Suurtagal ma tahay in la sii wado isticmaalkeeda? Waad fahmi doontaa ka dib akhriska
Qaybta miiraha ee sifaynta biyaha waa in si joogto ah loo beddelaa. Suurtagal ma tahay in la sii isticmaalo? Waad fahmi doontaa ka dib akhriska
Cunsurka miiraha ee biyaha lagu nadiifiyo ee guriga lagu rakibay ayaa si isdaba joog ah loo beddelaa. Ma dhaqi karaa oo ma sii wadan karaa isticmaalkiisa? Tani ma fiicna!
badbaadada isticmaalka biyaha guud ahaan, Waxaan aaminsanahay in qoysas badan ay rakibeen biyo sifeeyeyaal. Biyaha tuubada ayaa soo baxa ka dib marka lagu nadiifiyo biyaha miiraha waana la sifeeyaa si tayada biyaha ay uga dhigto mid nadiif ah. Biyaha tuubada waa la nadiifin karaa, ilaa xad, amaahda sheyga shaandhada. Mid ka mid ah walxaha miiraha ayaa sifeeya isha biyaha, ugu dambeyntiina walxaha miiraha ayaa xanniba waxyaabaha nijaasta ah.
Sababtaas awgeed, curiyaha miiraha ayaa wasakheyn doona muddo dheer ka dib isticmaalkiisa, oo wuxuu waayi doonaa shaqada nadiifinta biyaha. Waqtigaan, curiyaha miiraha wuxuu u baahan yahay in la beddelo si uu u sii wado isticmaalka miiraha biyaha. Ka dib isticmaalidda sifaynta biyaha, asxaab badan ayaa xustay dhibaato, taas oo ah, kharashka loo adeegsanayo biyo sifeynta lagu beddelayo walxaha miiraha ayaa dhaqso u dhaafi doonta qiimaha sifaynta biyaha.
Xaqiiqdii, tani waa kiiska. Qiimaha sifaynta biyaha waa ilaa dhowr kun oo gogo '. Si kastaba ha noqotee, sifaynta biyaha waxay leedahay dhowr waxyaalood oo miiraha ah, qaar daraasiin ah walxaha miiraha, iyo boqollaal ka mid ah walxaha miiraha, iyo walxaha miiraha qaarkood waxay qaataan dhowr bilood. Waxay u baahan tahay in la beddelo lixdii biloodba mar ama sanadkiiba mar. Qiimaha sheyga miiraha lagu daro qiimaha goobta ee lagu badalayo sheyga shaandhada runtii aad ayuu u sarreeyaa.
Saaxiibbada qaar waxay soo jeediyeen in maadaama ay qaali tahay in la beddelo sheyga miiraha, ma la bixi kartaa oo ma iska dhaqi kartaa naftaada ka dibna ma isticmaali kartaa? Ku dhaq biyo oo mar labaad dib u dhig, saameyn ma ku yeelan doontaa isticmaalka?
Ugu horreyntii, qaab dhismeedka curiyaha miiraha uma fududa sidaan filayno. Cunsurka shaandhada ayaa loo qaybiyaa qalab kala duwan oo lagu sifeeyo wasakhda waaweyn iyo kuwa yaryar. Waxaan soo saareynaa sheyga miiraha, waxa kaliya oo aan sameyn karno waa inaan biyo ku mayrno dusha sare ee walxaha shaandhada. Runtii waa macquul in la maydho wasakhda qaar, laakiin saameyn yar ayey leedahay.
Cunsurka miiraha cusubi guud ahaan waa caddaan muuqaal ahaan, wuxuuna noqon karaa madow ama bunni markii la isticmaalo muddo. Tani waa xayeysiinta wasakhda qaar. Waxyaabahaas laguma maydhin karo oo keliya biyo lagu maydho. Xitaa haddii dusha sare uu nadiif yahay, saameynta shaandhayntu daruuri maahan Waxaa la damaanad qaadi karaa in qof kastaa iibsado sifaynta biyaha si looga dhigo nadiifinta ilaha biyaha, laguna beddelo walxaha filter ee aan nadiifka ahayn. Xaqiiqdii, wali way wasakheysaa ilaha biyaha.
Sidaa darteed, tixgelinta caafimaadka iyo badbaadada, waa inaadan dib u dhigin beddelida walxaha shaandhada oo aad nadiifiso qaybta miiraha naftaada. Isticmaalka macquulka ah ee shaandhada miiraha waxay ka dhigi kartaa biyo sifeeyaha inuu si dhab ah u nadiifiyo. Qaabka sifaynta biyaha ayaa sidoo kale lagu sameeyay isbadalo waawayn. Sifeeyaasha biyaha qaarkood waxay leeyihiin bedelaad fudud oo ah walxaha shaandhada. Adiga ayaa iibsan kara walxaha shaandhada si aad u beddesho. Waxa kale oo jira agabyo cusub oo muddo dheer la isticmaalayey. Haddii aadan rabin inaad badasho walxaha miiraha, Waxaad sidoo kale ku beddeli kartaa biyo-sifeeyihii hore ee gurigaaga mid ku habboon.